3 Talaabada inay Qabtaan DataTraveler Recovery r
> Resource > Ladnaansho > 3 Talaabada inay Qabtaan DataTraveler Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga My Kingston DataTraveler USB?
Maanta markii aan isku dayay in ay helaan files ka DataTraveler Kingston, waxa ay ii sheegay in aan la formatted. Ma suurto gal ah inuu ka soo kabsado aan files lumay ka iyo sidii aan u samayn karaa. Aad ayaad u mahadsantahay.
Tani waa uun arin khasaaro xogta caadi ah in milkiilaha Kingston DataTraveler la kulmi lahaa. Oo haddii aad dhab ahaan doonayaan inay ka soo kabsadaan xogta ka DataTraveler, waxaad u baahan doontaa in aad joojiso isticmaalka qalabka marka hore. Xogta New si fudud overwritten karo files iyo files kuwa baabi'i doono weligiis. Markaasay aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa in la helo DataTraveler Recovery software internet-ka.
In this article, waxaan soo bandhigi doonaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac in aad. Barnaamijkan waa aalad muhiim u ah soo kabsaday tirtiray, kharribeen, iyo formatted files ka drives adag iyo qalabka flash. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u soo ceshano kartaa sawiro, videos, emails, waraaqaha xafiiska, iyo faylasha kale oo badan oo ka DataTraveler.
Hadda waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data ka soo kabsado hoos ku qoran.
Kabsado Xogta laga DataTraveler in 3 Talaabooyinka
Halkan aynu qaadan Windows version of Wondershare Data Recovery sida tusaale. Users Mac fadlan kala soo bixi version Mac iyo akhriso hagahaan user ay.
Tallaabada 1 ka dib rakibidda iyo ordaya Windows version of Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab ka soo kabsanaya interface bilowga ah. Si aad u soo kabsado files ka DataTraveler, waxaad dooran kartaa "File lumay Ladnaansho" mode.
Plus, fadlan xiriiriyaan DataTraveler la your computer iyo in la hubiyo in aad computer u aqoonsadaan lahaa sida drive adag.
Tallaabada 2 Barnaamijku wuxuu muujin doonaa oo dhan qoruhu on your computer, oo ay ku jiraan aad DataTraveler. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah si aad u DataTraveler oo guji "Scan" inaad raadiso files lumay.
Fiiro Gaar ah: "Enable Deep Scan" ikhtiyaar aad ku soo dejin doonaa natiijo iskaanka fiican, laakiin waxa ay qaadataa waqti dheer.
Tallaabada 3 scan ka dib, waxyaabaha uu ka helay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sida graphic, audio, video, archive, iwm Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa faylasha ay bedesheen natiijada iskaanka in ay "jidka".
Ugu dambeyntii, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro meel on your computer sii files soo kabsaday. HA iyaga ku badbaadin dib si aad u DataTraveler isla markiiba ka dib marka uu ka soo kabsado, ama dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.